Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Lehilahy manankarena indrindra any Vietnam dia manana drafitra hanavotana an'ity tontolo voan'ny virus ity
Ny COVID-19 coronavirus dia niantsambotra tamin'ny ankabeazany i Vietnam ao anatin'ny sainam-paritany - tranga 332 monja no notaterin'ny firenena fa tsy maty. Avy amin'ny foibe miitatra any Hanoi, ilay lehilahy nanan-karena indrindra tao Vietnam, ilay miliardera Pham Nhat Vuong, dia nahita filana ankoatra ny sisintany. Tamin'ny volana aprily, ny lehilahy manankarena indrindra tao Vietnam dia nanadihady ny fiangonany hatramin'ny fasana ary nandray fanapahan-kevitra. Miditra amin'ny rivotra izy.
Amin'ny tranga ratsy indrindra amin'ny COVID-19, manafika ny havokavoka ny viriosy, ka mihasarotra ny mahazo oksizenina ao amin'ny lalan-drà. Ny ventilator dia mety ho fahasamihafana eo amin'ny fiainana sy ny fahafatesana, ary tsy ampy ny isan'izy ireo. Raha ny tombana iray dia afaka mampiasa 800,000 ny hopitaly manerantany.
Ny tsy fahampiana dia masiaka indrindra any amin'ny tany an-dàlam-pandrosoana - i South Sudan, ohatra, dia manana ventilatera 4 fotsiny ho an'ny mponina 12 tapitrisa, saingy fohy ihany koa ny firenena manankarena indrindra eto an-tany. Taorian'ny tatitra fa nisy hopitaly New York City voadona mafy izay nanao «ventilator» novonoin'ny mpitsara mba hanompo marary 2 amin'ny fotoana iray, ny filoha Donald Trump dia nanery ireo mpamokatra fiara sy orinasa amerikana hafa hanomboka hanao ireo fitaovana ireo. Ny Ford Motor Co. sy ny General Electric Co. dia niara-niasa hanatitra ventilator 50,000 13 tamin'ny 336 Jolay tao anatin'ny fifanarahana nifanaovan'ny governemanta XNUMX tapitrisa $.
Mino i Vuong fa mahavita azy haingana kokoa sy amin'ny vola kely kokoa ny orinasany, Vingroup JSC. Nampiasa famolavolana loharano misokatra avy amin'ny mpanamboatra fitaovana Medtronic Plc, Vingroup dia nandefa ventilator miasa ho an'ny fankatoavana ny regulator amin'ny tapaky ny volana aprily. Raha mbola miandry ny mpandrindra ny Vietnam hanome ny fandrosoana ny orinasa, mihodina tsy hidina amin'ny tsipika fivorian'ny rivotra ny rivotra.
Ny rivotry ny Vingroup dia mitentina $ 7,000 any Vietnam, 30% ambany noho ny maodelin'i Medtronic. Nilaza ihany koa ny orinasa fa afaka mamokatra hatramin'ny 55,000 isam-bolana raha vao eken'ny governemanta izy ireo ary mikasa ny hanondrana azy ireo na aiza na aiza misy fangatahana. Nilaza i Vingroup fa hanome olona an'arivony maro ho an'i Okraina sy i Russia, izay i Vuong no manana fifamatorana efa hatry ny ela.
“Mandritra izany fotoana izany, hifantoka amin'ny famokarana rivotra (ventilator) marobe isika - ary hanao tsara izany”, hoy i Vuong, 51 taona, izay nizara ny tetikasany nandritra ny volana vitsivitsy tamina tafatafa tsy fahita firy tao amin'ny foiben'ny Hanoi Vingroup ary amin'ny andiana mailaka. "Te hiara-hiasa amin'ny governemanta Vietnamese izahay hamaha ny ampahany amin'ny olana amin'ny areti-mandringana."
Raha mihodina hopitaly sy tobim-pitsaboana vitsivitsy i Vingroup; ny naha mpanamboatra fitaovana fitsaboana dia tsy tao anaty fandaharam-potoana. Fa i Vuong, izay nanankarena tamin'ny voalohany nivarotra paty fonosana tao Okraina, dia fantatra amin'ny fatra-paniry laza an'i Vietnam. Ka, rehefa natosiky ny firenena ny mpamokatra an-trano hanao vokatra be pitsiny kokoa, dia nanomboka nanamboatra fiara sy finday avo lenta i Vingroup.
Ankehitriny, rehefa omen'ny governemanta tranga misaron-tava vitan'i Vietnam any amin'ireo firenena tratry ny viriosy any ampitan-dranomasina, dia ataon'i Vuong ho toy ny fampielezan-kevitra manerantany manintona kokoa ny rivotra: fivarotana fiara Vietnamianina amin'izao tontolo izao.
Ho an'ny mpitondra Vietnam, Vuong sy Vingroup dia porofon'ny fivoaran'ny firenena manomboka amin'ny toekarena sosialista ka hatrany amina tsena. Nankasitraka ny fitomboana sy ny fahombiazan'ny Vingroup ny governemanta tao anatin'ny fanavaozana an'i Vietnam.
Ny Ventilators dia mety manaporofo ny fampidirana stratejika ny tsena manerantany. Raha Vingroup dia afaka manala ny famokarana amin'ny ambaratonga andrasan'i Vuong, dia hiresaka tsy fahampiana eran'izao tontolo izao izy io, amin'ny fampiasana ny marika Medtronic ho mpanamboatra fitaovana fitsaboana efa napetraka. Ary raha miasa araka ny noeritreretin'izy ireo ny rivotra, i Vingroup dia hanaporofo ny fahaizany mamonjy fitaovana sarotra sy azo itokisana ary mamonjy aina - fa tsy fanararaotana ratsy ho an'ny mpanao fiara maniry.
Ny orinasa dia nanamboatra ny tsipika fivoriambe misy ny rivotra voalohany ao anatin'ny iray volana, izay manamboatra fehikibo conveyor 3 ao amin'ny ozinina smartphone 7 volana. Ny injeniera avy ao amin'ny tarika VinFast an'ny orinasa dia niasa tamin'ny famolavolana ilay fitaovana, ary ny solontena avy ao Medtronic dia manoro hevitra ireo mpiasa izay nanamboatra finday avo lenta sy tontolon'ny fahitalavitra herinandro vitsivitsy lasa izay.
"Vitsy dia vitsy ny orinasa eto amin'izao tontolo izao toa izany," hoy i Mark Mobius, mpanorina ny Mobius Capital Partners LLP. Nanam-bola tany Vietnam izy nandritra ny folo taona lasa ary manana fampiasam-bola tsy miankina amin'ny firenena. “Mahagaga ny faniriana. Fandresena lehibe izany - ny fanaovana an'i Vietnam ho mpilalao manerantany. ”
Ankoatr'izay, nanokatra ny hotely fisakafoanana voalohany tao Vietnam izy, ny Vinpearl Resort & Spa ao amin'ny Hon Tre Island, ampifandraisin'ny gondola 2 kilaometatra mankany amin'ny tanànan'ny ranomasina Nha Trang. Ahitana ny valan-drano voalohany an'i Vietnam sy ny golf 18-hole.
Nenden R. Rukasah avy ao amin'ny Vinpearl Hotels & Resorts dia nampahafantatra fa nanafoana ny torolàlana momba ny fanalavirana ara-tsosialy mandritra ny 22 andro i Vietnam ny 23 aprily 2020. Ny ankamaroan'ny varotra sy serivisy ao anatin'izany ny hotely sy hotely dia avela hamerina ny orinasany. Raha niresaka momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany ato ho ato i Rukasah dia nilaza hoe: “Rehefa manohy ny fiasan'ny sidina iraisampirenena ny seranam-piaramanidina dia manomboka mandeha tsikelikely ny asa sy ny fialan-tsasatra ho an'ny olona.
“Na dia antenaina aza ny olona hisorohana ny dia lavitra ary any amin'ny toerana lavitra no voadona mafy any am-piandohana. Noho izany, ny maha-a toeran-jotra fohy mankany India ary tsy dia misy fiatraikany amin'ny COVID-19 dia mahatonga an'i Vietnam ho toerana tsy misy risika handehanana fa tsy toa an'i Etazonia sy Eropa. ”
Ny maodelin'ny rivotra 2 an'ny Vingroup dia nahatratra ny fenitra teknika voalohany ary efa an-dàlana ny fitsapana ara-pitsaboana, hoy i Nguyen Minh Tuan, izay mitantana ny sampana ao amin'ny minisiteran'ny fahasalamana mifehy ny rivotra. Nilaza izy fa ny Vingroup dia tokony hahazo alalana amin'ny famokarana betsaka ny entona raha vao tonga amin'ity volana ity ny valin'ny fitsapana ara-pitsaboana.
Vuong dia nilaza fa ny vidin'ny ventilator ankehitriny dia ambany noho ny vidiny hanaovana azy ireo. "Ny tanjon'ny famokarana rivotra dia mikasika ny fandraisana anjara lehibe amin'ny fiaraha-monina amin'izao fotoan-tsarotra izao," hoy izy. Vetivety ihany koa. "Tsy manana drafitra hivelatra amin'ity sehatra ity izahay."
Vuong dia nanondro fa tia tanindrazana ambonin'izany rehetra izany, ary nilaza izy fa tiany ny orinasany hanohy hanampy ny lisitry ny voalohany ho an'i Vietnam. "Milaza amin'ny mpiara-miasa amiko foana aho: aza avela handalo tsy misy dikany ny fiainanao," hoy izy. “Aza avela hitranga amin'ny faran'ny fiainanao, tsy manana na inona na inona mendrika tadidy na hotantaraina ianao. Ho fiafarana mampalahelo izany fa tsy nampisy lanjany akory ny fiainanao. ”